Ukwenziwa kwe-Metal Mesh
IHoud Industrial International Limited (HOUD) ingumkhiqizi oholayo wemishini yensimbi namandla esixhumi. IHOUD iyingxenye yeqembu le-NBC. Isekelwe eDongguan City, eChina, namahhovisi eShanghai, eDongguan (HOUD), eHong Kong nase-USA. HOUD Sisungule eside p ...
Izixazululo Zokwakhiwa Kwendlebe
Ngokuqhubeka kwezikhathi, ukufunwa kwabantu ngamahedfoni ngeke kusenelisa izingoma ezilula kepha imisebenzi eminingi yamahedfoni. Ukufunwa Komthengi kuzoshukumisa imikhiqizo yamahedsethi ukuthi iye ekuqondiseni okungenawaya nokukhaliphile, kufaka phakathi ukuxhumana kwezwi, n ...
Izixazululo Zokusebenzisa Amandla we-UPS
I-UPS (Uninterruptible Power System) ukunikezwa kwamandla okunganqamuki okuxhuma ibhethri (imvamisa kuyibhethri yesondlo engena-lead-acid) kukhompyutha ephethe futhi kuguqula amandla we-DC abe amandla okusetshenziswa ngamasekhethi wamamojula njenge-inverter yomsingathi. It ikakhulukazi esetshenziselwa prov ...
Isixazululo esisheshayo seloli le-forklift
Ngokuthuthuka kobuchwepheshe, zonke izinhlobo zamathuluzi kagesi okuthuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kwempilo yansuku zonke, futhi lawa mathuluzi kagesi ahlobene nokukhokhiswa, okuhambisana nokuqhutshwa kokuphepha okuhambisanayo okuhambisanayo, futhi angabona ukuthi ipulagi yokuxhuma esheshayo yenziwa. I-ANEN Izixhumi Zamanje Eziphezulu ...
Isixazululo se-Led Connector
Ngokuthuthuka komphakathi kanye nokwenziwa okuqhubekayo kwesayensi nobuchwepheshe, izixhumi ze-ANEN zokukhanyisa ziyavela njengoba izikhathi zidinga. Lolu chungechunge lwezibani nezixhumi lungashesha ukungena, kulula ukufaka, ukonga amandla, kukhulisa kakhulu ukusebenza kahle ...
Izixazululo zeNew Energy Automotive Connector Solutions
Ngokwanda kwezimoto ezintsha zamandla, Ukwakhiwa kwenqwaba yokushaja kuyashesha futhi nesidingo sesixhumi sikhula ngokushesha. Ukuphendula ukuthuthuka okusheshayo kwezimoto zamandla amasha ngokuzayo, isixhumi esisha sezimoto zamandla ANEN sinezici ...
Izixazululo Zesistimu Yamandla Esolar Solar
Isici: Ukukhiqizwa kwamandla elanga, ngenxa yesici sawo ukuvikelwa kwemvelo yokongiwa kwamandla kanye nokutshalwa kwemali kwesikhathi esisodwa, inzuzo yesikhathi eside, manje, iyanweba kuwo wonke amazwe athuthukile ngokushesha, owazala isixhumi selanga esithi "Plug-and-play", ANEN ilanga ...
Izixazululo ze-OT Terminal Series Products Solutions
Izikhumulo ze-Brass, ezaziwa nangokuthi ucingo, ucingo lwethusi, ikhala lethusi, amabhulokhi wokugcina, njll., Zisetshenziselwa intambo kagesi ikhebula likagesi elixhunywe ezintweni zezinto ezisebenza ngogesi, uhlangothi olungaphezulu njengesikulufa esinqunyelwe ohlangothini, ngemuva kokuxebuka ku ukuphela kocingo lwethusi ...
Isixazululo Sokuxhuma Imoto Esiphuthumayo Esisheshayo
Amandla kagesi imboni yamandla kagesi ebaluleke kakhulu / eyisisekelo ekuthuthukiseni umnotho kazwelonke, ngokuthuthuka kwezikhathi, ukusetshenziswa kwemishini efundisa ngamandla kagesi kuya ngokuya kukhula; Izikhathi ezahlukahlukene zifuna isimo esiphuthumayo ...